တခါတုန်းက အေသင်ချိုဆွေ နဲ့ ဖွေးဖွေး… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Celebrity » တခါတုန်းက အေသင်ချိုဆွေ နဲ့ ဖွေးဖွေး…	18
Posted by lu ta lone on Jun 30, 2010 in Celebrity, Entertainment, Movies/TV, Other - Non Channelized, Photography | 18 comments
ဆရာ ငြိမ်းကျော်ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “တစ်ခါက” ကို VIDEO ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ မြင့်မြတ်၊ ဖွေးဖွေး၊အေသင်ချိူဆွေ တို့ နဲ့ အတူ ရိုက်နေဆဲဇာတ်ကားလေးပါ။”
lu ta lone has written 260 post in this blog.
etone says: ဘာများလဲလို့ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 76
ssa says: ဟုတ်ပါ့..ဂဲ့လူ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1326
cobra says: အေးလေ ဘာများလဲလို့….။
yokesoelay says: ဒီကတကယ်စိတ်ဝင်စားသွားတာ
pan pan says: ကလေးတုန်းပုံတွေများလားလို့….။
SP says: ဘာများလဲလို့ 
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: တော်တော်နောက်တဲ့ ကိုလူတလုံးဗျာ။ဖလန်း ဖလန်းတွေလားလို့ ။ဟီး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1368
ခပ် KING ကင်း says: တီခါတုံးကဆိုတော့
ငါးမရတော့ ရေချိုးပြန်တယ်ဗျာ .. ရှလွတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 909
နွေဦး says: အော်..ဒီလိုကြော်ငြာ လဲ ရသလား..?
Wai Phyoe says: ဘာများလဲလို့ဗျ
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: တခါတုန်းကပေါ့————ကိုလူတလုံး ကခုဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 259
Onyx says: ဟုတ်ပါ့ ဘာများလဲလို့ လူဆိုး
babe charley says: တို့လည်းထင်တာပဲ ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 758
Yin Nyine Nway says: တခါတုန်းက ဒူနဲ့ပဲ ခင်ခဲ့သလိုလို ဘာလိုလို
me me ko says: “တစ်ခါက” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကျွန်မ ကြည့်ဖူးပါတယ်….အရင်တုန်းက စိုးသူ ၊စိုးမြတ်သူဇာ၊မေဆွိ တို့ သရုပ်ဆောင် ထားကြတယ်…….you နောက်သလို ပြောင်သလိုနဲ့ တင်ပေးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ………..
cum min says: ဟာဗျာ..ဘာများလဲလို..
နာတိုက အနက်မ တိတာ
Myat Min says: ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်တော့ .. မျက်လုံးထဲ .. ကလေးဘ၀တုန်းကပုံလေး ၀ိုးတိုးဝါးတားပေါ်လာတာ .. ဒါနဲ့ မနေထိုင်တော့ပဲ တန်းဖွင့်လိုက်တာ .. ဒါကြီးနဲ့တိုးနေပါပကောလားကွယ်ရို့ …
အတိသဌ္ဇနာဂရ says: ဟုတ်ပါပေ့ဗျားးးးးကြာလှပီနော်
Comments By Postမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - Admin Kai - GaviaGirlကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - awra-cho - chitတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - Myo Thantသို့ ချစ်သောဖေဖေ - kyeemite - Myo Thantရထား ထွက်တော့ မယ် - ခရီးသည်ကြီးဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - kyeemite - လူကလေးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် -etoneရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ei Kyipyar - Yin Nyine Nwayမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - panpan - ဦးကြောင်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - awra-cho - kyeemiteနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကြည်ဆောင်း - Ei Kyipyarအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - kyeemiteဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - awra-cho - Kaung Kin PyarCongress - Admin Kai - Ei Kyipyarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - သူကလေးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - kyeemite - ဆူးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - kyeemite - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)ပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ခင် ခ - TNAလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီးအဟံ ပထမံ - TNA - ဆူး``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities